TWITCH: data kuvuza pane inozivikanwa papuratifomu | Linux Addicts
TWITCH: data kuvuza pane inozivikanwa papuratifomu
Inozivikanwa Twitch chikuva, yeAmazon, yakakanganiswa nekurwiswa kwakaburitsa data rakawanda mazuva mashoma apfuura. Pakati pe data rakaburitswa pakanga paine yakawanda sosi kodhi yekambani, data yega yevatengi vakanyoreswa papuratifomu, uye kunyange mitambo isina kuburitswa.
Mumwe anorwisa cyber akati ane mhosva yekurwiswa uku Amazon yaisada kupa ruzivo rwakawandisa, kunyange vachivimbisa kuti makadhi echikwereti kana mapassword evashandisi haana kuburitswa. Uyu munhu asingazivikanwe akaburitsa data reTwitch, akakurudzirwa kuita izvi se "kutsiva" kune network iyi (hapana chitsva, chokwadi, iyi system yaive yatomiswa pakutanga kwegore nekuda kwekusaita zvakakwana kuvharira kushungurudzwa).
Sezvaunoziva, muna October kare mihoro yevamwe vateresi yakaburitswa yetiweki iyi, pamwe nemamwe maturusi emukati anoshandiswa nekambani ine mutoro. Sechiyero, nhanho-mbiri yekusimbisa yekuwana Twitch yakavhurwa uye mapassword evashandisi vakanyoreswa akamanikidzwa kuchinja.
Kusati kwaziviswa kwe anonymous attacker, Twitch yakasimbisa zviri pamutemo kuti ichokwadi, uye kuti pakanga paine kutyora kwedata, asi kuti "mapoka avo ari kushanda nekukurumidza kuti anzwisise kukura kweizvi." Amazon yakaramba kutaura zvakawanda nezvenyaya iyi, kunyangwe yaizogadziridza sezvavakadzidza zvakawanda.
Sezviri pachena, dzakadeuka inenge 125 GB yedata, pakati pezvaive zvose zvataurwa uye kunyange zvinyorwa zvekubhadhara kwemamiriyoni e9.6 emadhora kune vateereri vezwi vemutambo wakakurumbira Dungeons & Dragons, uye 8.4 mamiriyoni emadhora kuCanada streamer xQcOW.
Kuburikidza nesocial network, vamwe cybersecurity nyanzvi vakatanga kutaura nezvekukosha kwekurwiswa, uye kuve nechokwadi kuti huwandu hwe data hwakaburitswa hwaive hwakakosha. Uye icho chinhu chakakomba uchifunga kuti ipuratifomu inounza pamwechete vanopfuura mamirioni makumi matatu vashanyi paavhareji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » TWITCH: data kuvuza pane inozivikanwa papuratifomu
Linux 5.16: Chipo cheKisimusi Nekuvandudzwa Kunoshamisa